Dibana nenkqubo yoqeqesho entsha kwiVenkile yeApple, i "Namhlanje eApple" | Ndisuka mac
Yazi inkqubo entsha yoqeqesho kwiVenkile yeApple, "Namhlanje eApple"
Namhlanje lusuku oluhle kuthi kuthi abathanda ukuya kwiVenkile yeApple ukuze bafumane iikhosi zoqeqesho kwaye uApple uthumele ipapasho labapapashi lisazisa ukuba inkqubo yoqeqesho efumanekayo kwiRetail iza kuhlaziywa ngenjongo yokuba intengiso ikhuthaza ngakumbi.
Ezi zifundo zoqeqesho ziya kugxila kumculo, iinkqubo, ukufota, ividiyo okanye uyilo, phakathi kwabanye, ke ngoko yonke into ijongeka intle kakhulu.
U-Apple uthathe inyathelo elitsha kuqeqesho lobuso nobuso ezivenkileni zakhe kwaye uthumele ingxelo kumajelo eendaba esazisa ukuba iigridi zezifundo zobuso nobuso ezivenkileni zayo. Iya kuhlaziywa ngezinto ezininzi ezintsha eziza kubonwabisa abo bezayo.
Ezi zifundo ziya kufundiswa linani elitsha le- Uyilo Pro, Abasebenzi abalingana ne-Genius kodwa ukusuka kwindawo yokujonga kunye nokusetyenziswa kunye nemveliso yohlobo. Bathe siyakubanamaqela amatsha angaphaya kwamashumi amathandathu, apho singadwelisa:
Ukuzoba Iindlela, apho umsebenzisi aya kufunda khona ukusebenzisa ii-watercolors kunye nebrashi.
Iiseshini zokufaka iikhowudi ngeendawo zokudlala ezikhawulezayo kwabo banomdla wenkqubo.
Iiseshoni zokufota, neefoto eziza kuthi zisetwe kwakhona.
Iiseshoni zepro, ukufunda indlela yokusingatha izicelo ezinje ngeFinal Cut Pro X kunye neLogic Pro X.
Ukuqonda kunye neeseshini zeZenzo, ezifundiswa ngoosaziwayo kwezobugcisa kwezinye iivenkile.
Ixesha lekhefu, ukukhuthaza ubuchule ngokuhlela iimovie kwiMovie, ukwenza iirobhothi ngeSphero, okanye ukuqamba umculo kwiGarageband.
Isitudiyo somculo, ezifanayo kwizifundo zangaphambili zokufota kodwa ngeendlela zokuqamba.
Iseshoni yoyilo yeyure enesiqingatha apho kuya kufundiswa nasiphi na isifundo sobugcisa kwaye abafundi baya kuba nakho ukuzisa iiprojekthi zabo.
Ngamafutshane konke Iphalethi entsha yeeseshoni zoqeqesho ezijongwe ngu-Angela Arendts ukuze ukusebenzisana kwakho nezixhobo zeApple kube ngamava amatsha. Yazisa kwakhona ukuba kwezi seshoni zintsha zonke izinto ezizakusetyenziswa ezisuka kwizikrini ziye kwindawo nasezihlalweni, ziye zahlaziywa ukuze umntu ozimasa akhululeke kakhulu ukongeza ekuveni nasekuboneni konke okusemandleni. .
«Isisiseko sayo yonke iVenkile yeApple injongo yokufundisa kunye nokukhuthaza uluntu esisebenza kulo«.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Yazi inkqubo entsha yoqeqesho kwiVenkile yeApple, "Namhlanje eApple"
I-Mac yam ayizukuqala, ngoku ndenza ntoni?
Ikhibhodi ye-GIF yongeza inkxaso yokujonga ii-GIF kwi-Bar yeTouch